Nagu saabsan - Anshan Topticom Tele-communication Co., Ltd.
Ganacsiga ugu fiican wuxuu ka bilaabmaa lamaanaha ganacsiga ugu fiican. Haddii aad raadineyso lammaanahaas saxda ah ee qalabka wax lagu beddelo, raadintaadu way dhammaatay.
La aasaasay 2014, Topticom waxay u taagan tahay Isgaarsiinta Sare ee Sare, tanina waa himiladeenna oo na hagaysay oo na dhiirrigelisay tan iyo markii la aasaasay. Kadib in kabadan 5 sano 'koritaan deg deg ah, waxaan gacan ka geysanay dhisida shabakad deg deg ah oo aamin ah aduunka oo dhan anagoo siineyna tayo sarre iyo kalsooni qaade.
Waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo iswaafajiya OEM-ku habboon, sida 100G QSFP28 / CFPx, 25G SFP28, 10G SFP +, GPON ONU, OLT ect. Waxaan diiradda saareynaa oo aan la soconaa horumarka teknoolojiyadda si aan kuu siino alaabada ugu casrisan si lagaaga caawiyo inaad dardar geliso saamigaaga suuqa ee alaabada istiraatiijiga ah.
Waxsoosaarka waxqabadka sare ee Topticom iyo adeeg aad ufiican ayaa ka caawiya ku guuleysiga fursada la shaqeynta shirkado badan oo adduunka caan ka ah.
Dhammaan alaabada Topticom waxaa loo soo saaray iyadoo loo eegayo shuruudaha ISO9001: 2000, UL, TUV, CE, FDA iyo RoHS si loo ilaaliyo 1st heerka fasalka.
Maxaa Na Kala Dhigay?
Way adkaan kartaa in la istaago goob suuq ah oo ay ka buuxaan bixiyeyaal isku mid u eg. Laakiin waxaa jira waxyaabo qaar u gaar ah shirkadda 'Topticom' oo runti naga soocaya kuwa kale ee wax iibiya.
1. Xoogga saar Adeegga Macaamiisha Sare
In Topticom, dhammaan la-hawlgalayaasha waxaa loo tababaray si sax ah hababka ugu wanaagsan ee loogu talagalay bixinta adeegga macaamiisha heer caalami ah. Waxaan higsaneynaa inaan kuu abuurnno khibrad aad u fiican adiga. Laga soo bilaabo soo jeedintaadii hore illaa gaarsiintii ugu dambeysay ee badeecadaada ama adeeggaaga, waxaa laguula dhaqmi doonaa sidii Boqorka.
2. Adkee oo Sii Qoto Dheer Xiriirka Macaamiisha
Qalabka wax lagu duubo ee 'Topticom optical transceivers' waxaa loo soo saaray iyadoo loo eegayo heerka ugu sarreeya ee warshadaha iyo 100% oo la is dhexgeli karo dhammaan barnaamijyada OEM. Waxyaalaha la isku halleyn karo waxay ku siin doonaan kalsooni markaad la shaqeyneyso macaamiishaada waxayna kaa caawinayaan inaad xoojiso oo aad qoto dheer xiriirka aad la leedahay.
3. Taageero aan xadidnayn
Topticom waxay maalgelin doontaa waqti, R&D iyo ilo si ay u taageeraan waxaad u baahan tahay oo dhan, xitaa ka hor intaanan bilaabin iskaashi rasmi ah.
4. Noqo Qof Daacad Ka Ah Wax Soo Saarkayaga iyo Adeegyadayada
Waa inaad soo qabataa qaar ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha oo been kuu sheegaya oo dhibaato weyn kugu keenaya. Gudaha Topticom, tan waligeed ma dhici doonto. Daacadnimadu maahan oo kaliya siyaasadeena ugu fiican, laakiin waa siyaasadeena ugu weyn, marwalba waxaan kula socodsiineynaa xaalada dhabta ah ee ku saabsan wax soo saarkeena iyo adeegeena.